Amin'ny oktobra 2017, mila manana taratasy fanamarinana SSL mangarahara | Martech Zone
Talata, Aogositra 8, 2017 Douglas Karr
Fanamby amin'ny Internet foana ny mitazona mialoha ny filaminana. Nimbus Hosting dia namorona sary mahasoa vao haingana, maneho ny maha-zava-dehibe ilay vaovao taratasy mangarahara SSL fandraisana andraikitra ho an'ny marika eCommerce, ary koa ny fanomezana lisitra feno mba hanampiana amin'ny famindrana ny tranokalanao amin'ny HTTPS. The infographic, SSL mangarahara & Ahoana ny famindrana ny tranokalanao mankany HTTPS amin'ny 2017 manasongadina ohatra ny antony ilana an'ity hetsika SSL vaovao ity.
Misy tantara mampatahotra SSL sasany
Mpitsikilo frantsay - Hitan'i Google fa sampan-draharaham-panjakana frantsay no nampiasa mari-pankasitrahana Google SSL hitsikilo mpampiasa maromaro.
Github vs Sina - Mpampiasa iray nifehy zana-tsokajin'ilay tranokala fampiantranoana Github no diso nahazo mari-pankasitrahana SSL ho an'ny sehatra iray manontolo avy amin'ny manampahefana sinoa iray.
Ireo niharam-boina Iraniana - Fanamarinana dizitaly sandoka navoakan'ny DigiNotar no nampiasaina hanenjehana ny kaonty Gmail misy mpampiasa Iraniana manodidina ny 300,000 tamin'ny 2011.
Noho ireo antony ireo sy ny hafa, raha tsy manana taratasy fanamarinana Transparent SSL ny tranokalanao amin'ny volana Oktobra 2017, dia hanisy marika ny tranokalanao i Chrome Tsy azo antoka, fanakiviana ny mpampiasa tsy hitsidika azy io, ary mety hampidi-doza ny fiarovana ny tranokalanao. Izao no fotoana mety indrindra hidirana amin'ny sambo.
Manaova fitsapana Google Transparency amin'ny SSL Certificate
Tetikasa Transparency Google Certificate
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, noho ny lesoka ara-drafitra ao amin'ny rafitra fanamarinana HTTPS, ireo mari-pahaizana sy famoahana CA dia voaporofo fa marefo amin'ny fifampiraharahana sy ny fanodikodinana. Tetikasa mangarahara momba ny taratasy fanamarinana an'i Google mikendry ny hiaro ny fizotry ny famoahana mari-pankasitrahana amin'ny alàlan'ny fanomezana rafitra misokatra ho an'ny fanaraha-maso sy ny fanamarinana ireo mari-pankasitrahana HTTPS. Google dia manentana ny CA rehetra hanoratra ny mari-pankasitrahana navoakan'izy ireo amin'ny hazo voamarina ampahibemaso, ampiana fotsiny, ary porofo tsy azo ovaina. Amin'ny ho avy dia mety manapa-kevitra ny tsy hanaiky mari-pankasitrahana mbola tsy nosoratana tamin'ny hazo toy izany i Chrome sy ireo mpitety hafa.